December 10, 2017 - TV Annapurna
December 10, 2017 TV-Annapurna
नेपाली काँग्रेसबाटछ काभ्रे १ को ख का उम्मेदवार बनेका गुण्डा नाईके गणेश लामा पराजित भएको छ । उनि एमालेका चन्द्र लामासँग ४ हजार मतान्तले पराजित भएका हुन् । एमाले सम्बद्ध युवा संघका उपाध्यक्ष चन्द्र लामा २४ हजार ४४७ मत प्राप्त गरे । निकटतम प्रतिस्पर्धी गणेश लामाले २० हजार २७० मत प्राप्त गरे । बिजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक कांग्रेसमा बिलयसँगै प्रदेशसभाको उम्मेदवार बनेका गणेश लामामाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा चलिरहेको छ । उनीविरुद्ध अपरहण, फिरौती र ज्यान मार्ने उद्योगमा समेत प्रहरीले पटकपटक मुद्दा चलाएको छ ।
बिजय ज्ञवाली | गुल्मी जिल्लाको हकमा मात्र नभएर यि तिनैजना नेता केन्द्रिय राजनितिसंगै समग्र देशको लागी अति आवश्यक नेता हुन। एमाले सचिवद्वय क.प्रदीप ज्ञवाली र गोकर्ण विष्ट तथा कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य चन्द्र भण्डारी केन्द्रिय राजनितिमा पनि उत्तिकै प्रभाव राख्दछ्न जति गुल्मीको समृद्धिमा यिनिहरुको योगदान छ। कुनै आग्रह पूर्वाग्रहविना निष्पक्ष भएर सोंच्ने हो भने यि तिनैजना नेताको एकआपसमा घनिष्ठ सम्बन्ध पनि छ। नेपालका लोकतान्त्रिक शक्ति होऊन या बामपन्थी शक्ति नै किन नहोऊन, समग्रमा पार्टिको नाम फरक रहेतापनि यि दूवैथरि शक्तिविचमा थुप्रै विषयहरुमा समानता रहेको छ। पार्टिका कतिपय प्रभावशाली र उच्च पूँजीवाला…
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम बर्दिया १ बाट पराजित भएपछि एक विज्ञप्ती जारी गदै हारबाट आफू निराश नभएको बताएका छन् । देशभर बाम गठबन्धनको जितले आफु सन्तुष्ट रहेको भन्दै गौतमले अब एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता हुने र यसमा आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीमा उत्तिकै र अझ उर्जाका साथ लागि पर्ने बताए । विज्ञप्ति : निरन्तरको संघर्ष र बलिदानपछि नेपाली जनताले समाजवादाउन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संवैधानिक प्रत्याभुती प्राप्त गरेका छन् । २०७२ सालमा नयांँ राजनीतिक व्यवस्थाको रुपमा यसलाई संविधानभित्र समेटिएको छ र त्यसको कार्यान्वयनकै प्रकृयामा अगाडि बढ्दै हामीले स्थानीय निर्वाचन, संघीय प्रतिनिधिसभा…
बारा ३ मा फरमुल्लाह मंसुरलाई हराउँदै यादव विजयी, प्रदेश (ख)मा फोरमकै साह विजयी
बारा । बारा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं ३ मा लोकतान्त्रिक गठबन्धनका फरमुल्लाह मंसुरलाई हराउँदै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका रामबाबुकुमार यादव विजयी हुनुभएको छ । यादवले २१ हजार ३३६ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (एमाले)का अध्यानन्द पाण्डेयले १६ हजार ३६२ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने नेपाली काँग्रेसका फरमुल्लाह मंसुरले १६ हजार २६ मत मात्र प्राप्त गरेको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत प्रकाश खरेलले जानकारी दिनुभएको छ । त्यसैगरी निर्वाचन क्षेत्र नं ३ को प्रदेशसभा (ख)मा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका पारस साहले विजयी प्राप्त गर्नुभएको छ । साहले ११…
झापामा वाम गठबन्धनको क्लिन स्वीप, कस्ले कति मत पाए ? विस्तृतमा
सुरुङ्गा । प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ झापाका पाँचवटै र प्रदेशसभा सदस्यतर्फ दशवटै क्षेत्रमा वाम गठबन्धनले जीत हासिल गरेको छ । आज दिउँसो सार्वजनिक पाँचवटै क्षेत्रको अन्तिम मत परिणामअनुसार नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा गठबन्धन विजयी बनेका हुन् । झापा क्षेत्र नं १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा राम कार्की विजयी हुनुभएको छ । नेकपा (माओवादी कोन्द्र)का स्थायी कमिटी सदस्य कार्कीले ३६ हजार १७३ मत प्राप्त गर्दै विजयी हुनुभयो । उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी विश्वप्रकाश शर्मासँग उहाँ दुई हजार ८७३ मतान्तरमा विजयी बन्नुभएको हो । शर्माले ३३ हजार ३१० मत प्राप्त गर्नुभयो । झापा क्षेत्र…
दाङ । यहाँको सबै मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षको परिणाम आज बिहान सार्वजनिक भएको हो । दाङमा तीनवटै प्रतिनिधिसभा सदस्य वाम गठबन्धनले जितेको छ भने प्रदेशसभाको पाँचवटा वाम गठबन्धन र एउटा काँग्रेसले जितेको छ । क्षेत्र नं १ मा वाम गठबन्धनबाट (एमाले)का उम्मेदवार मेटमणि चौधरी निर्वाचित हुनुभएको छ । पहिलो पटक आम चुनाव लडेका मेटमणिले पूर्वसांसद एवम् नेकाकी उम्मेदवार सुशीला चौधरीलाई १३ हजार ८३४ मतान्तरले हराउनुभएको छ । काँग्रेसका प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्काको घर भएको दाङ क्षेत्र नं १ मा जीत निकाल्ने क्रममा…
उदयपुरको पछिल्लो अवस्था के छ ? मत परिणाम विस्तृतमा
प्रतिनिधि सभा १ नेपाली कांग्रेस डा. नारायण खड्का २३८०६ एमाले बाम मञ्जु चौधरी २४०८६ मतगणना जारी करिब २० हजार मत गणना बाकी प्रदेश सभा १.१ एमाले बाम विमल कार्की १७५०१ (विजयी नेपाली कांग्रेस विदुर बस्नेत १५४२५ प्रदेश १.२ नेपाली कांग्रेस हिमाल कार्की १६७९२ (विजयी) बाम गठबन्धन राम बहादुर मगर १५१९४ प्रतिनिधि सभा २ बाम गठबन्धन माके सुरेस कुमार राई २२५५१ (विजयी) नेपाली कांग्रेस नारायण काकी १५४५५ प्रदेश २.१ बाम गठबबन्धन माके नारायण बुर्जा मगर ९८७० (विजयी) नेपाली कांग्रेस भेषराज मगर ५९३४ प्रदेश सभा २.२ बाम गठबन्धन एमाले कला घले १३४५९…
यस्तो छ चितवनको पछिल्लो मत परिणाम
चितवन क्षेत्र न ३ खसेको मत: ९३ हजार ८२३ गणना गरिएको मत संख्या :५०८६० माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल: २६२८२ राप्रपा प्रजातान्त्रिक बिक्रम पाण्डे : २०१७७ मतान्तर ६१०५
एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल अछामबाट विजयी
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल अछामबाट विजयी भएका छन् । अछामको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार बनेका रावल २४ हजार ८ सय ८३ मत प्राप्त गरेर विजयी भएका हुन् । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार भरत स्वाँरले १७ हजार ७ सय १९ मत प्राप्त गरेर पराजित हुमुभएको निर्वाचन कार्यालय अछामले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्रपतिमा को आउला, बामदेव की अरु ? विस्तृतमा
December 10, 2017 December 12, 2017 TV-Annapurna
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बामदेब गौतम बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित भएका छन् । कांग्रेसका नेता तथा सिँचाईमन्त्री सञ्जय गौतमसँग उनि ७ सय ५३ मतले पराजित भएका हुन् । गोरखामा नारायणकाजी श्रेष्ठ र बर्दियामा बामदेब गौतमको पराजयले अहिले बाम गठबन्धन भित्रै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको मिनविन्द्रका रुपमा चिनिने गौतमको पराजयले अब एमाले माओवादीको सम्बन्ध के हुने भन्ने प्रश्नहरु प्नि चार्चमा आउन थालेका छन् । गौतमको पराजयले सबैलाई अचम्मित तुल्याएको छ । राष्ट्रपतिमा को आउला ? विभिन्न अड्कलवाजी शुरु भएका छन् ।…